Home Wararka Yaa ka danbeeyay dilkii afarta ruux ee lagu dilay Isgoyska Xaawo-taako degmada...
Yaa ka danbeeyay dilkii afarta ruux ee lagu dilay Isgoyska Xaawo-taako degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya afartii ruux lagu dilay Isgoyska Xaawo-taako degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in raga dilka geystay ay ku hubeysnaayeen Bastoolado ay afarta ruux ku dileen goob maqaaxi ah oo ay fadhiyeen.
laba ka mid ah dadka lagu dilay Isgoyska Xaawa-taako ee degmada Wadjir ayaa magacyadooda lagu sheegay Xasan Dacaar iyo Cali Dahab. waxaa sidoo kale la sheegay in askari goobta ka agdhawaa rasaas uu furay inuu ku geeriyooday nin magaciisa lagu soo koobay Jeeri oo qudaar ku iibinaayay suuq weynaha madiina.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliiska dowladda Federaalka ayaa sida caadada aheyd gaaray goobta uu falka ka dhacay, kuwaas oo goobta ka qaaday Meydadka afarta ruux ee lagu dilay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ilaa iyo hada lama oga cida ka danbeeysay dilkaas qorshaysan ee loo gaystay dadka shacabka ah.